ညီတဦးက oral မေးခွန်းအတွက်...chat box မှတဆင့်...
preferential trip အကြောင်းမေးလာသမို့...
ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ post တွေထဲမှ..."Colour Plate for MCCB" ကို၊ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။)
main switch board MSB တွေရဲ့ feeder panel တွေမှာ..
MCCB ဆိုတဲ့ molded-case circuit breakers တွေနဲ့..
MCB ဆိုတဲ့ miniature circuit breaker တွေ..
circuit breaker ဆိုတာကတော့...
overload ဒါမှမဟုတ် short circuit အခြေအနေ..
တခုခုဖြစ်ပေါါပြီး၊ electrical circuit တခုအပေါါ..
အလိုအလျှောက်တားဆီးပေးမယ့် 'ခလုပ်' ဖြစ်ပြီး..
"circuit breaker is an automatically operated electrical switch designed to protect an electrical circuit from damage caused by overload or short circuit"..ရယ်လို့..
MCCB နဲ့ MCB တွေဟာ..
low voltage circuit breaker တွေဖြစ်ပြီး..
1, 000 VAC ပမာဏအောက်မှာသာ..
main switch board MSB ရဲ့ feeder panel တွေမှာ..
တတ်ဆင်ထားတဲ့ MCCB နဲ့ MCB တွေကို..
သတိထားကြည့်မယ်ဆိုလျှင်၊ အချို့ breaker တွေမှာ..
အနီရောင်၊ အချို့ breaker တွေမှာ၊ လိမ္မော်ရောင်..
အချို့ breaker တွေမှာ အဝါရောင် နဲ့..
အချို့ breaker တွေမှာတော့ အစိမ်းရောင်..
colour plate လေးတွေ၊ ထည့်သွင်း..
main switch board ရဲ့ front panel...
အရောင်တွေဟာ မည်သည့် electrical circuit သို့မဟုတ်..
မည်သည့် electrical motor circuit အား..
ဒါ့အပြင် colour plate လေးတွေနဲ့..
ရည်ညွှန်းဖော်ပြထားတဲ့ MCCB နဲ့ MCB အများစုဟာ..
shut tripping coil ထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားတဲ့..
circuit breakers တွေဖြစ်သလို..
breaker ရဲ့ဘေးမှာ wire ကြိုးအစ (၂) စ..
ထုတ်ထားတာကိုလည်း၊ main switch board ရဲ့..
colour plates လေးတွေဟာ..
emergency stop, preferential trip နဲ့..
sequential start တို့ကို၊ represent အနေနဲ့..
(၁) - Emergency Stop - သဘေ်ာရဲ့ စက်ခန်းမှာ..
မီးလောင်တဲ့အခါ၊ မီးလောင်မှူကို အားပေးနိုင်မယ့်..
လေ၊ လောင်စာနဲ့ အပူတို့ကို လျှော့ချရန်၊ လိုအပ်ပါတယ်။
အကယ်၍ မီးစလောင်ခဲ့လျှင် လည်ပတ်မောင်းနှင်နေတဲ့..
engine room blowers fans တွေ၊ purifiers တွေ..
fuel oil transfer pump, boilers နဲ့ incinerators..တို့ကို၊ အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
emergency stop push button ခလုပ်ကို..
ယေဘုယျအနေနဲ့ emergency stop push button ခလုပ်ကို..
engine room entrance အဝင်တံခါးအနီးနေရာတွေနဲ့..
wheel house မှ control console နေရာတွေမှာ..
emergency stop နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့..
main electrical supply source MCCB နဲ့..
MCB တွေကို၊ MSB မှာတတ်ဆင်ထားသလို..
အနီရောင် red colour plate ဖြင့်..
အနီရောင် red colour plate ဖြင့် ဖော်ပြထားတဲ့..
MCCB နဲ့ MCB တွေဟာ၊ shut tripping coil..
တတ်ဆင်ထားတဲ့ electrical switch တွေဖြစ်သလို..
တည်ဆောက်ပုံအရ shut coil သို့ electrical power..
ပေးသွင်းထားမှသာ breaker "ON" နိုင်မယ့်..
emergency stop push button ဟာ..
"NC" ဆိုတဲ့ normally closed contact ဖြစ်ပြီး..
MCCB နဲ့ MCB တွေရဲ့ shunt coil အစ၊ တစနဲ့..
အပြိုင် parallel ဆက်သွယ်ကာ၊ coil သို့..
electrical power ပေးသွင်းထားပါတယ်။
emergency stop push button ကို..
"နှိပ်" လိုက်ရာမှ၊ NC contact ဟာ..
open ဖြစ်သွားပြီး၊ shut coil သို့ပေးသွင်းထားတဲ့..
electrical power အား၊ ဖြတ်တောက်လိုက်ခြင်းဖြင့်..
MCCB နဲ့ MCB တွေကို "trip" အနေနဲ့ "ဖြုတ်" ချကာ..
main electrical supply source အား..
(၂) - Preferential Trip - Preferential Trip အကြောင်း..
ဖော်ပြတဲ့အခါ၊ generator protection system နဲ့..
generator protection system တွေကို..
generator ရဲ့ "main breaker" မှာထည့်သွင်း..
main breaker တွေဖြစ်တဲ့..
air circuit breaker (ACB) နဲ့..
oil circuit breaker (OCB) တို့မှာ..
generator protection system တွေကတော့..
reverse power protection နဲ့..
under voltage protection တို့ဖြစ်ပါတယ်။
over current protection မှာ preferential trip,..
instantaneous trip နဲ့ over load trip ဆိုပြီး..
(၃) မျိုးပါရှိ ပါတယ်။
generator ကို load "တင်" အသုံးပြုနေစဉ်..
generator ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ "ဝန်"..
တနည်းအားဖြင် "load" ထက်..
over load လို့ခေါါတဲ over current..
အဲဒီအခါမှာ ထမ်းဆောင်ထားတဲ့ "load" များရဲ့..
အရေးပါမှု၊ မပါမှု essential and eon-essential..
အလိုအလျှောက်ခွဲခြား "လျှော့" ချပါတယ်။
'inverse definite minimum time'‭ ဆိုတဲ့..
"Preferential Trip" လို့ခေါါပါတယ်။‬
Preferential Trip ဖြင့် non-essential load တွေကို..
"လျှော့" ချရာမှာ၊ 1st Preferential Trip,..
(၅) စက္ကန့်၊ (၁၀) စက္ကန့်နဲ့ (၁၅) စက္ကန့်..
သတ်မှတ်ကာ၊ အဆင် လိုက် 'ဖြုတ်' ချသွားပါတယ်။
preferential trip နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့..
1st preferential trip လိမ္မော်ရောင် orange colour plate..
2nd preferential trip အဝါရောင် yellow colour plate..
အစရှိသလို၊ သိသာစေရန် သက်ေတပြုဖော်ပြထားပါတယ်။
MSB ထဲမှ preferential trip relay တွေရဲ့..
"NC" normally closed contact ကို..
preferential trip နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ MCCB နဲ့..
MCB တွေရဲ့ shut coil 'အစ' တစဖြင့်..
"အပြိူင်" parallel ဆက်သွယ်ကာ၊ coil သို့..
preferential trip relay ရဲ့..
"NC" normally closed contact ဟာ..
open position သို့ပြောင်းသွားတဲ့အခါ..
shut coil သို့ပေးသွင်းထားတဲ့..
electrical power အား..
MCCB နဲ့ MCB တွေကို "trip" အနေနဲ့..
Generator ရဲ့ main circuit breaker မှာ..
current setting ကို၊ (85 - 95 %) ခန့်..
ချိန်ညှိထားလေ့ရှိပြီး၊ setting ကျော်လာတာနဲ့..
1st preferential trip relay အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
1st preferential trip ဖြင့် "ဖြုတ်" ချပေမယ့်..
မူလ current setting ပမာဏအောက်သို့..
ကျဆင်းသွားခြင်းမရှိတဲ့အခါ 2nd preferential trip ဖြင့်..
ထပ်မံ "ဖြုတ်" ချပါတယ်။
အချို့ power distribution system တွေမှာ..
1st preferential trip နဲ့ 2nd preferential trip..
တို့သာမက၊ 3rd preferential trip ကိုပါ..
toilet and bath room exhaust fan တို့ကို..
Preferential Trip နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့..
non-essential load တွေအဖြစ်..
(၃) - Sequential Start - Sequential Start အကြောင်း...
ဖော်ပြတဲ့အခါ၊ electric motor starter..
electric motor တလုံး 'စ' တင်မောင်းနှင်တဲ့အခါ..
start push button ကို၊ တချက်နှိပ်ရုံဖြင့်..
start push button ရဲ့..
"NO" normally opened contact ဟာ..
close position ဖြစ်သွားပြီး..
main magnetic contactor လည်း..
တချိန်ထဲမှာ start push button ရဲ့..
"NO" normally opened contact နဲ့..
အပြိုင် parallel ဆက်ထားတဲ့..
main magnetic contactor မှ..
(a contact) ဟာလည်း၊ close position ဖြစ်သွားပါတယ်။
start push button ပေါါ၊ 'ဖိ' လိုက်တဲ့ လက်ကို..
ဖယ်လိုက်ပေမယ့်၊ main magnetic contactor ရဲ့..
auxiliary contact (a contact) ဟာ..
close position ဖြစ် သွားသလို..
completed circuit အခြေအနေတခု..
ရှိလာတဲ့အတွက်၊ electric motor..
Sequential Start motor starter တွေမှာတော့..
"NO" normally opened contact ကို..
(a contact) ဖြင့် အပြိုင် parallel..
main magnetic contactor မှအခြား..
(b contact) တခုဖြင့်လည်း၊..
"အပြိုင်" parallel ဆက်ထားပါတယ်။
Main Breaker "ပြုတ်" ကျသွားတဲ့အခါတွေမှာ.. လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပြတ်တောက်ပြီးမှ..
power re-store အဖြစ်..
'start push button' 'နှိပ်' ကာ..
electric motor အားမောင်းနှင်ရန်မလိုအပ်ပဲ..
Sequential Start motor starter ဟာ..
MSB မှ Sequential Start ရဲ့..
MCCB ကို "ON" ထားတဲ့အတွက်..
ပြန်လည်ရရှိလာတဲ့ electric power ဟာ..
Sequential Start motor starter မှ..
main magnetic contactor ရဲ့အခြား..
(b contact) သို့၊ ရောက်ရှိသွားပြီး..
main magnetic contactor အား..
colour plate for MCCB အနေနဲ့..
Sequential Start ကို အစိမ်းရောင်..
green colour plate ဖြင့်..
Sequential Start MCCB ဟာ..
shunt coil ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိတဲ့..
သို့မဟုတ် auxiliary engine sea water..
cooling pump ရဲ့ motor starter ကို..
Sequential Start starter အဖြစ်..
Posted by ကိုထွန်းသူ at 19:28 No comments:
Posted by ကိုထွန်းသူ at 06:35 No comments:
Posted by ကိုထွန်းသူ at 16:03 No comments:
Posted by ကိုထွန်းသူ at 17:08 No comments:
Posted by ကိုထွန်းသူ at 16:27 No comments:
Posted by ကိုထွန်းသူ at 04:04 No comments:
Posted by ကိုထွန်းသူ at 01:26 No comments:
"Colour Plate for MCCB".ညီတဦးက oral မေးခွန်းအတွက်...